सिन्धु विकास बैंकको ८०% हकप्रद भर्न अब २ दिन मात्र बाँकी, कहाँ जाने आवेदन दिन ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सिन्धु विकास बैंकको ८०% हकप्रद भर्न अब २ दिन मात्र बाँकी, कहाँ जाने आवेदन दिन ?
काठमाडौं - सिन्धु विकास बैंकको ८०% हकप्रद भर्न २ कार्यदिन मात्र बाँकी छ । बिहीबार र्सावजनिक विदा परेकाले अब यो हकप्रदमा शुक्रबार र आइतबार मात्र आवेदन दिन सकिनेछ । बैंकले भदौ १८ गतेदेखि असोज २२ गतेसम्मका लागि १०:८ अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको २० लाख ९७ हजार ५४० कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । यो हकप्रदमा भदौ ८ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा सिन्धुको चुक्ता पुँजी २६ करोड २१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ छ । हकप्रद सेयर बिक्रीपछि भने बैंकको चुक्ता पुँजी ४७ करोड १९ लाख ४६ हजार ५०० रुपैयाँ हुनेछ । चौथो त्रैमासमा बैंकले ३ करोड ७२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ २० पैसा ९वार्षिक० र प्रतिसेयर नेटवर्थ १२६ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ ।
एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्स लाजिम्पाट काठमाडौंबाट आवेदन दिन सकिनेछ । त्यसैगरी, सिन्धु विकास बैंकको मुख्य कार्यालय बाह्रबिसे सिन्धुपाल्चोक र यसका अधिकांश शाखा कार्यालय तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका चिप्लेढुंगा पोखरा, विराटनगर, वीरगंज, नारायणगढ, बुटवल, नेपालगंज र धनगढी शाखा कार्यालयबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । सिन्धुको यो हकप्रदमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्सले गरेको छ ।
प्रकाशित : Thursday, October 05, 2017